बेलायतले लैजाने नेपाली नर्सको तलब वार्षिक ७५ लाखसम्म ! कसरी जाने ? यस्तो छ तरिका - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
बेलायतले लैजाने नेपाली नर्सको तलब वार्षिक ७५ लाखसम्म ! कसरी जाने ? यस्तो छ तरिका
बेलायतसँग वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अंग्रेजी भाषामा निपुणले मात्रा यो अवसर पाउने देखिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै भाषा परीक्षा समेत लिने बेलायतको प्रस्ताव छ ।
तर, नर्सहरू पनि विभिन्न स्तर र प्रकारका रहेकाले कस्ता नर्सले बेलायतमा अवसर पाउने भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको घिमिरेले बताए । नेपालमा एसएलसी गरेर तालिम लिएका, उच्च शिक्षा लिएका, स्नातक गरेका र स्नातकोत्तर गरेकासम्म फरक-फरक प्रकृतिका नर्स छन् । नर्सको भाषाको स्तर कस्तो हुने र उत्तिणाङ्क कति हुनुपर्ने लगायतका पक्षमा अहिले दुबै पक्षमा छलफलमा छ ।